…त्यसपछि उनलाई पटक पटक आनन्द आउन थाल्यो ! – PathivaraOnline
Home > Uncategorized > …त्यसपछि उनलाई पटक पटक आनन्द आउन थाल्यो !
…त्यसपछि उनलाई पटक पटक आनन्द आउन थाल्यो !
admin November 8, 2020 November 10, 2020 Uncategorized	0
मनोज गजुरेलका पूर्व ‘अर्धाङ्गीनी’ले फेसबुकमा लेखेको स्टाटसले सबैकाे मन छोएपछि एकाएक यस्तो भयो!.
२ महिना अघि बिवाह भएकी श्रीमतीलाई दाजुभाईको मृत्यु प्रकरणमा किन लगाईयो दोष ? (भिडियो)
२ वटा हेलिकप्टर आकाशमै ठोक्किँदा १३ सैनिकको दुःखद निधन